Daalụ — njem Lee - Official Site
M nnọọ na-ekwu na-ekele gị ka onye ọ bụla kpere ekpere maka anyị mgbe anyị nọ na tour na oké kọntinent Africa. Jehova ji amara zaa ọtụtụ n'ime ndị ekpere, na-eji gị na anyị na-eme ka onye na mmetụta na isii dị iche iche mba. The tour ugbu a bịara ná njedebe na anyị na-aga n'ụlọ n'abalị a.
Anyị na-ekele gị wee na-ekpe ekpere maka nchekwa njem na n'ihi na ike. A ole na ole nke anyị enwebeghị mmetụta nke ọma na anyị chọrọ ime ka ọ home ike. Ana m atụ anya ikenye a blog na-agwa gị ihe niile banyere anyị njem. Tupu mgbe ahụ anyị na-ekele gị ekpere
Daniel mtombosola • August 19, 2013 na 7:43 Abụ • zaghachi
Moby • August 19, 2013 na 7:44 Abụ • zaghachi
Njerucathy • August 19, 2013 na 7:44 Abụ • zaghachi
Bradleydmv • August 19, 2013 na 7:44 Abụ • zaghachi
Kristy Cothran • August 19, 2013 na 7:44 Abụ • zaghachi
Rebecca • August 19, 2013 na 7:45 Abụ • zaghachi
Cera Ngunjiri • August 19, 2013 na 7:45 Abụ • zaghachi
Josiah • August 19, 2013 na 7:45 Abụ • zaghachi
Boyd Lawrence Zimba • August 19, 2013 na 7:46 Abụ • zaghachi
Lusayo • August 19, 2013 na 7:46 Abụ • zaghachi
Alexsakala • August 19, 2013 na 7:46 Abụ • zaghachi